Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Samsung Galaxy S8+ နဲ့ iPhone7Plus ဘယ်သူ ပိုမြန်မယ်ထင်လဲ ??? ♫
♪ Samsung Galaxy S8+ နဲ့ iPhone7Plus ဘယ်သူ ပိုမြန်မယ်ထင်လဲ ??? ♫
မကြာသေးခင်ကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ Samsung ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Flagship စမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Galaxy S8 နဲ့ S8+ ဟာ Qualcomm Snapdragon 835 နဲ့ 4GB RAM တို့ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ပေါ့ပါးမြန်ဆန်ကာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိ Android စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Galaxy S8+ ရဲ့ ပေါ့ပါးမြန်ဆန်မှုကို Apple ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ iPhone7Plus (RAM 3GB) ရဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ဘယ်သူ ပိုသာမယ်ထင်ပါသလဲ ??? ခန့်မှန်းပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အဖြေမှန်၊ မမှန် မကြာခင်သိရတော့မှာပါ။
လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းက စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စမ်းသပ်ချက်၊ နှိုင်းယှဉ်ချက် ဗီဒီိယိုတွေကို ရိုက်ကူး တင်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ Phonebuff YouTube Channel မှာ Samsung Galaxy S8+ နဲ့ iPhone7Plus တို့ရဲ့ အမြန်နှုန်း စမ်းသပ်နှိုင်းယှဉ်ချက် ဗီဒီယို ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ (၂၁) ရက်နေ့က တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုမှာ ဖုန်း(၂) ခုစလုံးကို ကိုင်ကာ တူညီတဲ့ ဂိမ်းတွေနဲ့ app တွေကို တစ်ခုဝင် တစ်ခုထွက် နဲ့ စမ်းသပ်ပြထားတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့မရ ၊ စောဒက တက်လို့မရနိုင်တဲ့ အဖြေတစ်ခုထွက်ပေါ်လာ ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်မှန်၊ မမှန် ဆိုတာ အောက်က ဗီဒီယို မှာ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါတော့။